Iinkcukacha Product Uviwo zilahlwe Production Line Line
Iiglavu eziveliswe kumgca wokuvelisa zinokwahlulahlulwa zibe ziindidi ezimbini: umbala wendalo kunye nombala. Imibala ibandakanya okumhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka, icobalt eluhlaza okwesibhakabhaka, imfusa neblue, pinki, tyheli neminye imibala eyahlukeneyo. Umbala wendalo ngowona mbala uphambili wemveliso, kwaye omnye umbala we-masterbatch onemibala eyahlukeneyo unemibala eyahlukeneyo. Ngokumalunga nemveliso yokugqibela, inokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zomthengi, kubandakanya ubungakanani, ubungakanani, ubunzima, umbala, njl njl.
Uyilo lomxholo woviwo lwezoNyango iNitrile Glove Production Line
Itekhnoloji yelayini yeglavu yokuvelisa isikhuseli ihlaziyiwe ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo. Ngelixa sikwazi ukufunda ubuchwephesha obuqhubela phambili obuvela eMalaysia naseJamani, sikwasoloko senza izinto ezintsha. Kwixesha elidlulileyo, ibimelwe yinkqubo yokubumba yesandla esinye. Nangona imveliso yayizinzile, imveliso yayisezantsi kakhulu. Ngokwenza ulingo oluqhubekayo, inkampani yethu ivule umgca wemveliso yetekhnoloji yokubumba yesandla sesibini. Njengommeli wetekhnoloji entsha, ukusebenza kakuhle kwemveliso kuphuculwe kakhulu, kwaye sinezinto ezibonakalayo zokufika kwabafika njengabangeneleli abatsha.
Ukhetho lwemigca yokuvelisa
Imveliso yemveliso: Uyilo olwenziwe ngokwezifiso lwabathengi abahlukeneyo kunye nezityalo ezahlukeneyo.
Umthamo: Ngokwesityalo, yila umgca wemveliso ukuze wandise amandla emveliso.
Amandla: Sebenzisa ezona ndawo ziluncedo zamandla kunye nezixhobo zokusebenza ngokwamandla okwenza ukuba kwandiswe iindleko.
Uluhlu lwemveliso yegloves yovavanyo lwe-nitrile lusetyenziselwa ikakhulu ukuvelisa iigloves zovavanyo lwe-nitrile zonyango, ezisetyenziswa ikakhulu kuhlolo olungelulo olokuhlinzwa, olufana nezigulana ezingalaliswayo, oogqirha bamazinyo kunye novavanyo lwaselebhu oluqhelekileyo.
Egqithileyo Inqanaba lokuvelisa inzala yeiglavu zenzala
Ezilahlwayo zilahlwe Production Line
Ukudinwa kweglavu yemizi mveliso
Imveliso yeNitrile yeGlove Production Line
Zilahlwe isikhuseli nkxu Machine
Nitrile isikhuseli Oomatshini